मदन पुरस्कार विजेता राजनमाथि आरोप : ‘मेरा श्रीमान् ‘१५ औं प्रेमिकासँग बस्छन्’ | Nagarik News - Nepal Republic Media
५ जेष्ठ २०७५ २८ मिनेट पाठ
प्रगति राई जमेकी साहित्यकार हुन् । खुलस्त लेखनले उनी चर्चामा आउँछिन्। ‘लेखककी स्वास्नी’ उपन्यास उनको खुलस्त लेखनको उदाहरण हो। दोस्रो उपन्यास ‘बिर्सेको मृत्यु’ पहिलोझैँ जमेन। अहिले भने उनी लेखनभन्दा वैवाहिक जीवनबारे आफैँले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले चर्चामा छिन्।
‘मेरो श्रीमान् अहिले १५ औं प्रेमिकासँग बस्छ,’ उनी निर्धक्क श्रीमान्को परस्त्री सम्बन्धबारे बोल्छिन् तर कानुनीरूपमा उनी मुकारुङकी पत्नी नै हुन्। दुवै अलग–अलग बस्छन्, छोडपत्र भइसकेको छैन तर पतिपत्नीबीचको व्यावहारिक र भावनात्मक सम्बन्ध छैन, दुवैबीच।
उनका पति हुन्, मदन पुरस्कार विजेता राजन मुकारुङ जो शब्दमार्फत् पिछडिएका वर्गको मुक्तिको पक्षमा वकालत गर्छन् । सिमान्तमा पारिएका, उत्पीडनमा पारिएकाहरुको पक्षमा उभिने उनी अहिले आफ्नै श्रीमतीबाट अक्षम पति र लापरवाह बाबुको उपमा पाइरहेका छन्।
उत्पीडित दलित वर्गको पक्षमा लेखिएको ‘दमिनी भीर’ उपन्यासले उनलाई मदन पुरस्कार दिलायो तर उनै मुकारुङ उनकी पत्नीको नजरमा स्त्री लम्पट छन्।
दुवैसँगको कुराकानीका सम्बन्धमा तीतो घोल्ने काम करिब एक वर्षअगाडि राजनकाे माेबाइलमा फेला परेकाे अापत्तिजनक तस्बिर बनेको देखियो । प्रगतिले दुवै बीचको सम्बन्ध सार्वजनिक गर्दा ‘१५ औं प्रेमिकाको तस्बिर देखेपछि सहन सकिनँ’ भनेकी थिइन् । ती १५ औं प्रेमिका को हुन् ? दुवैले खुलाएका भने छैनन्।
प्रगतिका शब्दमा अहिले उनले श्रीमान् मुकारुङसँगको सम्बन्धमा १० वर्षको छुट्टी लिएकी छन्। उनी अहिले छोराहरुसँग बस्छिन्, राजन आफ्नी १५ औं प्रेमिकासँग।
भौतिक र शारीरिक दुवै रूपमा निकट नभए पनि दुवै कानुनी रूपमा अलग भएका छैनन्। आखिर कस्तो सम्बन्ध हो दुवैको ? के ले रोकेको छ दुवैलाई, एक हुन् या कानुनी रूपमै अलग हुन्।
शुक्रवारकर्मीले प्रगति र राजन दुवैको यो पाटो केलाउने प्रयन्त गर्याे। प्रगति शुक्रवारसँग आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धबारे खुलेरै बोलिन्। साहित्य यात्राबारे चर्चा गर्दा खुलेकी उनी जब व्यक्तिगत जीवनमा प्रवेश भयो, उनी केही भावुक, केही कठोर देखिइन्।
प्रगतिको मात्र भनाइ राख्दा अपुरो हुन्थ्यो, यो विषय। शुक्रवारकर्मीले राजनसँग समेत सम्पर्क गर्‍यो । पछिल्लो समय उनी काठमाडौं भन्दा बाहिरै बस्ने रहेछन्। शनिबार सम्पर्क गर्दा उनी धरानमा थिए। उनी काठमाडौं फर्किएर प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने पक्षमा देखिए । शुक्रवारले टेलिफोनमा कुरा गर्न राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेनन्।
मुकारुङ वैवाहिक जीवनका चर्चापरिचर्चाबारे त्यत्ति गम्भीर देखिएनन्, जति प्रगति देखिएकी थिइन्। उनी यसलाई श्रीमान्–श्रीमती बीचको सामान्य ठाकठुकको कोणबाट विश्लेषणमा लागे । तर, दुवैको भनाइले उनीहरुको सम्बन्ध ठाकठुक मात्रै हैन भन्ने देखाइरहेको थियो।
‘सार्वजनिक भएका सबै कुरा सत्य होइनन् । प्रगतिजीले त्यस्तो भन्नुभयो जस्तो लाग्दैन,’ उनले प्रष्टीकरण दिए, ‘यो बाहिरका मान्छे घर जोड्नेभन्दा पनि तोड्नेतर्फ उन्मुख भए जस्तो लाग्छ।’
प्रगतिले जसलाई आफ्नो श्रीमान्को १५ औं प्रेमिकाको रूपमा चित्रण गरेकी छन्, उनलाई राजन भने केवल प्रशंसक मात्रै रहेको दाबी गर्छन्। राजन भन्छन्, ‘सबैको प्रेमी–प्रेमिका हुन्छन् तर म अरुजस्तो लुकाएर हिँड्दिनँ ।’ उनको परिभाषामा ‘घरपरिवार र प्रेम भनेको फरक कुरा हो । प्रेम जसलाई पनि गर्न मिल्ने’ उनको भनाइ छ । उनको यो भनाइले प्रेमप्रति उनको उदार भाव देखाउँछ । प्रगतिलाई उनको यही उदार भाव बिझाएको देखिन्छ।
त्यस्तो माइन्ड गर्ने खालको मान्छे थिइनँ म । प्रेमिकाहरुलाई साइडमा राखेर आफ्नो घर राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो । म पनि त्यही चाहन्थेँ । सानो सुन्दर घर बनाऊँ भन्ने रहर थियो तर उनीसँग बस्न सकिने अवस्था भएन । मेरो सपना चकनाचुरै भयो।
ए बाबा ! त्यो उसको मात्र घर हैन नि ! त्यो हाम्रो पनि हो । कहिलेकाहीँ ठाकठुक पर्दा हरेक पुरुषले घर छाडेर जा भन्थे, मलाई पनि उनले भने । अनि म भन्थेँ, घरभित्र बसेर एक–एक सामान हेर, के कस्तो छ अनि बल्ल भन । घर त मेरो हो नि!
छोरा पनि छन् । श्रीमान्ले कत्तिको हेर विचार गर्नुहुन्छ ?
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७५ १४:२९ शनिबार
मदन पुरस्कार विजेता राजनमाथि आरोप मेरा श्रीमान् १५ औं प्रेमिकासँग बस्छन्